Ngamanye amaxesha abazali bayakulibala ukuba igumbi lomntwana lizwe lakhe, elidibanisa ubuhle kuphela, ubuninzi beendawo ezikhululekile kunye nobuthathaka, kodwa kunye nevakalelo zokukhusela okupheleleyo. Uninzi lwawo, le ntetho isebenza kumantombazana. Ngoko-ke, sicinga malunga nokuba yintoni idibanti yebhinqa lalo ntombazana, sinqwenele ukukunika iingcebiso malunga naluphi uhlobo lwegumbi labantwana eliza kuba yintombi yakho ethandekayo kwaye ngexesha elifanayo.
Igumbi loyilo lokulungiselela intombazana
Xa uklanyelwe ikamelo labantwana kwintombazana, kufuneka uqaphele umbala wombala. Umbala obalaseleyo we-nursery yi-bedding soft. Khumbula ukuba ngelixa uchitha ixesha lakhe egumbini lakhe, umntwana kufuneka aphumle kwilizwe langaphandle, kunye neetoni ezidumbileyo, ezincitshiswe kwiimpawu eziluhlaza kunye ezimhlophe kunye nezinto ezinobumba obunqamlekileyo, zenze igalelo kule nkulu. Iskimu esinjalo sombala sinempembelelo enhle kubantwana kunye nesicatshulwa sabo.
Xa ukhetha iphepha lodonga kwigumbi labantwana, khetha ukhetho lwakho lokukhanya kunye nezinye iindlela zokukhetha umbala. Ukukhetha enye yale mibala, unokwenza ngokulula usebenzise izinto eziphathekayo, umzekelo, iiwashi zodonga, ezinemibala yeengqungquthela zabantwana, iifoto kwiifom, imifanekiso, izibuko, iipaneli. Ngendlela, imizobo edwetshwe yintombi yakho iya kufumana indawo efanelekileyo kwaye iyancedisa ukuyila kwegumbi. Ngenxa yobuchule obunjalo, ungakhetha inxalenye ethile yedonga okanye ikona.
Ungafaki ikhompyutha okanye iTV kwikamelo labantwana. Nika ingqalelo enkulu kwindawo yokulala. Ngendlela, kungakhathaliseki ukuba kutyhutyha njani, kuya kuba mnandi ukuba ubeke ibhedi enkulu ebini egumbini lentombazana. Ngokutsho kweengcali, kwigumbi lawo abafana baninzi ixesha badlala phantsi, kodwa amantombazana akhetha umbhede wezemidlalo. Kutheni ungenzi le ndawo yendawo yokuzizonwabisa ithala elikhulu (kwaye ngaphezulu, ngcono) ukuba intombi yakho ingadlala, ifunde, okanye irekhode kwidayari yakhe.
Ifenitshala ekamelweni labantwana
Ukongeza kwisibhedlele, igumbi kufuneka liqulethe ezinye izinto zefenitshala kwiintsana, oku: i-shelf yeencwadi, i-closet okanye isifuba sokugcina izinto, i-ottoman kunye nedeski. Ngendlela, intombazana encinci idinga itheyibhile, ekufuneka ijongane nayo okanye idlale ngamadonki kwimidlalo yokudlala indima (ukuphuza itiye ephuculweyo, ukubonisa, ukudlala esikolweni).
Kwintombazana eneminyaka engama-school school kubaluleke kakhulu ukuhlakulela umkhwa wokulandelelana kwinqanaba lokuqala. Ngenxa yeso sizathu, kwigumbi lentombi yakhe kufuneka ngokuqinisekileyo ibe yindawo ethile, apho ubophekile ukuba ambeke amathoyizi emva kokuba edlala nabo. Le nto inokuba yikhabhinethi, iseshfu okanye ibhaskethi ekhethekileyo yamathoyizi. Ukukhetha ifenitshala, kuyimfuneko ukukhokelwa yinto yokuba kufuneka uyihlobise ngokuqhelekileyo kwaye yatshintshe ngaphakathi yangaphakathi kwigumbi lomntwana. Ngoko ukuba i-locker yokugcina amathoyizi kufuneka ibe nemibala eqaqambileyo kwaye ibe nesimo esingavamile nesono. Ngendlela, ifenisha yokuhlobisa kunye neentsimbi zokubhabisa izakunika indawo yangaphakathi.
Ukongeza kwitheyibhile kunye nazo zonke ezinye izinto zefenitshala, kufuneka kube neklasi elincinane kwigumbi lentombazana, elimele lifakwe kwitheyibhile lezonyango. Khumbula ukuba ukususela ebuntwaneni, bonke abantombazana banomdla wokuzenzela, okubanceda baqiniseke ngakumbi ngobomi babo abadala.
Igumbi lamabhinqa ekwenzeni amantombazana
Zonke izinto zemibala, apho igumbi labantwana liza kufumana ukukhangela okungaqhelekanga kunye nemikhosi, inokwenziwa lula ngokwakho. Thenga idayeni ngepateni elihle kwaye uncede ukuguqula emva kombhede, izihlalo, izitulo zentonga, izibilini kunye neerms of mirrors. Ukusuka kwinquwa efanayo, ungagungqa ingubo ebhedeni, i-pillowcases kwimithwalo. Uza kufumana ingaphakathi elingu-smart and true girlish yegumbi.
Iifowuni ekwakhekeni kwegumbi labantwana bhinti
Umgca wokugqibela uhambelana nombala we-decoration yamathoyizi angaphandle, i-carpet okanye i-chair-bags. Igumbi lomncinci wakho omncinci lingaqwalaselwa lipheleleyo.
Amakhethini afanelekileyo: iimpawu zangoku 2016
Umngaphakathi Wasekhaya: Ukukhanya kweCail
Ishicilelwe ividiyo kunye noJohnny Depp ngexesha lokugxekwa no-Amber Hurd, ividiyo
Isiflethi se-salmon kunye neminquma e-steamed
Iiprogram zekhompyutha ze-accounting
Ndihleli nomntwana, ndifuna ukubheka enkulu
Kungekudala, "iBanyanTree" iya kuvula indawo entsha yokubonisa